Aung's Investment: DBS Exercise
ဒီBlogရဲ့ ပင်တိုင်ပရိသတ်တွေထဲမှာ စင်္ကာပူက မြန်မာတွေတော်တော်များတာတွေ့ရလို့ စင်္ကာပူက Stockတစ်ခုကို Base လုပ်ပြီးပြောရင် ပိုစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်။ Singapore Exchangeမှာ Stockသိပ်များများစားစားမရှိပါဘူး။ အဲဒီ့ထဲကမှ Major Indexဖြစ်တဲ့ STI (Straits Times Index)ထဲက Major stock (D05) DBSကို ရွေးထားပါတယ်။ ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် Exerciseသဘောလဲ ရစေချင်လို့ပါ။
Stockတစ်ခုကို Beginnerတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရွေးတဲ့အခါမှာ ဒီလို Major Components of Major Indexကို ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။ အဓိက Reasonကတော့ သူတို့ဟာ Generally Riskပိုနည်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Long Corporate Historyရှိပြီး Large Customer baseရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရွေးတာ တက်သစ်စStockတွေထက် အများကြီး Riskပိုနည်းပါတယ်။
Fundamentalနဲ့စရအောင်။ http://www.dbs.com/investor/Pages/default.aspx ကိုသွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ DBSဟာ အစဉ်အလာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းတော့ စင်္ကာပူကလူတွေက ကျွန်တော့်ထက် ကုမ္ပဏီရဲ့ ယေဘုယျအကြောင်း အများကြီးပိုသိမှာပါ။ Customerတောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် Investorတစ်ယောက်ကြည့်ရမယ့် ရှုထောင့်က သတင်းစာထဲက Headlineဖတ်ရုံနဲ့တော့ မရဘူး။ Ok - let's dig the numbers.
P/E? P/Eကို တွက်ဖို့ http://www.dbs.com/investor/Pages/fin_highlights.aspx ကိုသွားပါ။ Per Share Data(S$)ဆိုတဲ့ Sectionကို သွားကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ Subsection Per basic shareဆိုတာနဲ့ Per diluted shareဆိုတာထပ်တွေ့လိမ့်မယ်။ အဲဒီ့နှစ်ခုထဲက Dilutedကို ရွေးပါ။ Dilutedဆိုတာ လက်ရှိStockအရေအတွက်အပြင် futureမှာ ထပ်အသစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရေအတွက်ကိုပါ ထည့်စဉ်းစားပါတယ်။ Conservative Investorတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုအခြေအနေကိုပါ ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့အတွက် Dilutedကို ရွေးမယ်။ Dilutedမှာမှ excluding one-time gains and chargesကို ပိုသုံးသင့်တယ်။ one-time itemတွေဟာ အမြဲဖြစ်နေမယ့်အရာတွေမဟုတ်တော့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ General Performanceကို တိုင်းတဲ့အခါမှာ ဖယ်ထားသင့်တယ်။ Per diluted share earings excluding one-time gains and chargesတွေဟာ တစ်နှစ်စာAnnualisedလုပ်ပြီးတွက်ထားတယ်လို့ Pageအောက်ဆုံးက Fine Printမှာ ပြောထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀.၉၅၊ ၀.၉၃အစရှိတာတွေဟာ Quarterတစ်ခုစီအတွက်ပေမယ့် တစ်နှစ်စာတွက်ထားတာလို့ သိရမယ်။ ဒါကြောင့် Most Recent Quarterလေးခုရဲ့ Average EPS (Earnings Per Share)ကို တွက်ပါ။ ပြီးရင် နောက်ဆုံးClose Priceကို အဲဒီ့ Averageနဲ့ စားလိုက်မယ်ဆိုရင် P/Eကိုရပါလိမ့်မယ်။
Per Share Data sectionက net book valueနဲ့ dividendကိုသုံးပြီး P/Bနဲ့ Dividend Yieldကိုတွက်ပါ။ DYတစ်ခုထဲကိုပဲ သာမန်Bank interest rateနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ပိုသာတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Fundamentalပြီးရင် Technicalပိုင်းသွားရအောင်။ အောက်မှာ DBSရဲ့ Candle chartကို 2009 Februaryကနေစပြထားတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ DBSဟာ Augustမှာ Trendပျက်ပြီး Side-way သွားနေတာ ဒီနိုဝင်ဘာလဆန်းအထိပါ။ ၆၊၁၁၊၂၀၀၉မှာ ဘာလို့ ထောင်တက်သွားလည်းဆိုတော့ Quarterly Earningထွက်လာလို့ပါပဲ။ Result is very strong result compared with last year same quarter. ဒါကြောင့် ၁၄.၁၄ resistanceကို breakoutလုပ်သွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုက်ဝယ်သင့်သလား? နောက်ဆုံး Candleကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ Knowledgeကို အရင်Postတွေမှာ ကျွန်တော်ရေးပြပြီးပါပြီ။ ဘယ်ဈေးကို စောင့်ကြည့်ရမလည်း၊ ဘယ်လောက်ရောက်ရင် ဝယ်မလည်း၊ အစရှိတာတွေကို နည်းနည်း Brain Teasingလုပ်ကြည့်ပါ။ အားလုံးကို ကျွန်တော်ကပဲပြောနေရင် ပျင်းစရာကြီး၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို Comment boxထဲချသွားဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 11/20/2009 10:45:00 AM
Labels: exercise, methods
YNWT November 20, 2009 2:16 PM
DBS ရဲ့ Fundamental ကတော့ ကောင်းပါတယ်. Market အရလဲ သတင်းတွေက bull ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် Technical မှာတော့.. shooting star တွေ့တယ်..မ၀ယ်သေးပဲ စောင့်ကြည့်မယ် ၁၄.၁၄ အောက်ကို brake သွားလားလို့.
Kavan November 21, 2009 2:37 AM
thanks, before I seen this blog i only know the about FA.
I choice the growth stock and income stock. so I only know FA.
Really thank you. now I can learn TA aslo.
how about the BH Global (B32) and Golden Agr (E5H) singapore stock. I think this two also not bad in FA .
Aung Myo Htet November 22, 2009 10:21 PM
B32 TA does not look good. you might want to close it out. E5H TA looks alright - showing upside potentials.
Candlesticks - Part II